Dad , youre writing - Английский - Бирманский Переводы и примеры
Вы искали: dad , youre writing about me ! (Английский - Бирманский)
ရေကဲ့သို့ အစဉ်မပြတ်ဝိုင်း၍ တညီတညွတ် တည်း ဝန်းရံကြပါ၏။
အကယ်၍ မှောင်မိုက်သည်ငါ့ကိုဖုံးလွှမ်းမည်ဟု တဖန်ဆိုလျှင်၊ ညဉ့်သည်လည်း အကျွန်ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌ အလင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
နေ၏အရောင်ထက်မကသော အလင်းသည် အကျွန်ုပ်မှစ၍ အကျွန်ုပ်နှင့်အတူ သွားသောသူများ ပတ်လည်၌ ကောင်းကင်ထဲက ထွန်းတောက်သည်ကို၊ မွန်းတည့်ချိန်တွင် လမ်းထဲမှာ အကျွန်ုပ်မြင်ရပါသည်။ အရှင်မင်းကြီး။
This year, for my birthday, I receivedasmall pistol fromafriend who was worried about me, vulnerable inacountry where almost everyone is now armed.
ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် အဖြေတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်ုပ် ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်သော်လည်း အသတ်ခံရသော လူသတ်သမားများအတွက်တော့ ဝမ်းနည်းမှုကို ခံစားရန် မတတ်နိုင်တော့ပါ။
လမ်း၌သွား၍ ဒမာသက်မြို့အနီးသို့ ရောက်သောအခါ၊ မွန်းတည့်အချိန်တွင် ကောင်းကင်ထဲက ကြီးသောအလင်းသည် အကျွန်ုပ် ပတ်လည်၌ ရုတ်ခနဲ ထွန်းတောက်ပါ၏။
တောင်ခြေရင်းအမြစ်သို့ အကျွန်ုပ်ဆင်း၍၊ မြေ ကန့်လန့်ကျင်အတွင်း၌ အစဉ်အမြဲပိတ်ထားသော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်အသက်ကို ပျက်စီးရာမှ ကယ်ဆယ်တော်မူလိမ့် မည်။
သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူ သောပြည်ကို သင်သည် ဝင်စား၍ နေသောအခါ၊ သင်က၊ ငါ့ပတ်လည်၌ နေသော တပါးသော လူမျိုးအပေါင်းတို့ နည်းတူ၊ ငါသည် ရှင်ဘုရင်အရာ၌ တစုံတယောက်ကို ချီးမြှောက်မည်ဟု ဆိုလျှင်၊
ယခုပင် ငါ့ပတ်လည်၌ရှိသော ရန်သူတို့၏ အပေါ်သို့ ငါ့၏ဦးခေါင်းကို ချီးမြှောက်တော်မူ၏။ ထိုကြောင့် ဗိမာန်တော်မှာ တံပိုးမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွ ယဇ် ပူဇော်ပါမည်။ သီချင်းဆိုပါမည်။ ထာဝရဘုရားကို ထောမနာသီချင်းဆိုပါမည်။
hulphondengeleider (Голландский>Французский)t tt (Английский>Русский)temthi italisht (Албанский>Итальянский)सेक्सी मूवी (Английский>Хинди)agur deneri (Баскский>Французский)khana khane aaoge k nahi (Хинди>Английский)maison neuve (Французский>Бретонский)encenall (Каталонский>Испанский)syntet (Норвежский>Английский)gleichlautend (Немецкий>Английский)verbuik (Голландский>Французский)what is copy furnish (Английский>Тагальский)britadeiras (Португальский>Английский)letrang ngo (Тагальский>Английский)hernial orifices (Английский>Шведский)troiugenum (Латинский>Итальянский)aštuoniasdešimt (Литовский>Испанский)cover letter (Африкаанс>Английский)pakkosiirtolaisina (Финский>Маори)pergunte (Английский>Португальский)importadas (Испанский>Немецкий)事业发展 (Китайский (упрощенный)>Японский)sandas karna (Хинди>Английский)minr unit (Английский>Венгерский)cher rois mages (Французский>Испанский)